जे बर मागे पनि पूरा हुने पाथिभरा माताकाे दर्शन गरी हेर्नुस् माघ १ गते शनिबारकाे राशिफल !
January 14, 2022 N88LeaveaComment on जे बर मागे पनि पूरा हुने पाथिभरा माताकाे दर्शन गरी हेर्नुस् माघ १ गते शनिबारकाे राशिफल !
शनिबार तपाईको लागि लाभदायक साबित हुँदैछ। वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूले अज्ञात स्रोतबाट धन प्राप्ति हुने सम्भावना छ। बैंकिङ्ग क्षेत्र तथा कपडा बेचबिखन व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरुको लागि लाभको समय रहेको छ । तपाईं पनि सम्पत्ति खरिद गर्न विचार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको लागि शनिबार कस्तो रहनेछ हेर्नुस २०७८ माघ १ गते शनिबारकाे दैनिक राशिफल मेष: ब्यापार ब्यवसायमा दाजुभाइको […]
January 14, 2022 N88LeaveaComment on उच्च शिक्षाका लागि अष्ट्रेलिया जाँदै हुनुहुन्छ, यी कुरा विचार गर्नुहोस्
काठमाडाैं । कोरोना कहरले २२ महिना बन्द भएको अस्ट्रेलियाको अन्तर्राष्ट्रिय सिमा अघिल्लो महिनादेखि खुलेको छ। सिमा खुलेसँगै अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया भित्रने विद्यार्थीको संख्यामा बाक्लो भिड देखिएको छ। कंगारूको देश अस्ट्रेलिया पछिल्लो समय नेपाली विद्यार्थीका लागि पहिलो रोजाइमा पर्दै आएको छ। अष्ट्रेलिया भित्रने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये सबैभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी रहेको यहाँको सरकारी तथ्याङ्कले जनाएको छ। अस्ट्रेलियाको […]
January 14, 2022 N88LeaveaComment on यी ४ चीज देखिनु अत्यन्तै शुभ मानिन्छ, दिन्छ कुनै पनि कामको सफलताको संकेत
ज्योतिष शास्त्रमा शुभ र अशुभ कुराहरु बताईएको छ । जीवनमा धेरै कुरालाई अशुभ वा अशुभ मानिन्छ। एकै समयमा, केहि चीजहरू देख्नु राम्रो संकेत हो। घरबाट निस्कँदा वा बाटोमा जाँदा यी कुराहरू देख्दा काममा सफलता मिल्छ । बाटोमा सिक्का प्राप्त गर्नु पनि शुभ चिन्हमा समावेश छ। यसलाई पितृको आशीर्वाद भनिन्छ । भनिन्छ, यस्तो हुँदा पितृको आशीर्वाद […]
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ५ हजार ८७ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । बितेको २४ घण्टामा देशभर १३ हजार ४७४ जनामा आरटी–पीसीआर गर्दा ४ हजार २०४ जना र ७ हजार ८६ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ८८३ जना गरी आज ५,०८७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । यो सँगै नेपालमा कोरोना […]
January 14, 2022 N88LeaveaComment on साउथ इन्डियन सुपरस्टार रामचरणकाे सम्पती कति छ ? आलिशान घर, विलासी गाडी र एयरलाइन्स कम्पनीका मालिक !
रामचरण तेजाको कुल आम्दानी साउथ इन्डियन सुपरस्टार रामचरण आफ्नो उत्कृष्ट अभिनयका साथै आफ्नो विलासी जीवनशैलीका लागि परिचित छन्। रामचरण तेजाको दक्षिणमा मात्रै नभई देशभरि ठूलो फ्यान फलोइङ छ। लिजेण्ड सुपरस्टार चिरञ्जीवीका छोरा राम चरण साउथ फिल्मबाट सिने जगतमा ठूलो नाम कमाइसकेका धनी कलाकारमध्ये एक हुन् । रामचरणले फिल्मबाट मात्रै कमाइ गर्दैनन् । रामचरणको आफ्नै एयरलाइन […]
चाणक्य नीति : यस्तो घरमा कहिल्यै पनि हुँदैन लक्ष्मी देवी बास, रहन्छ सधै गरिबी र दुःख
January 14, 2022 N88LeaveaComment on चाणक्य नीति : यस्तो घरमा कहिल्यै पनि हुँदैन लक्ष्मी देवी बास, रहन्छ सधै गरिबी र दुःख
काठमाडाैं । सुखी र सफल जीवन जिउनका लागि आचार्य चाणक्यले धेरै उपयोगी कुराहरू बताएका छन्। उनले धन कमाउने उपाय बताउदै माता लक्ष्मीको आशीर्वाद सदैव प्राप्त गरिरहन महत्वपूर्ण सल्लाह पनि दिएका छन् । महान अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्यले यस्ता ५ कुरा बताएका छन्, जसबाट सधैं टाढा रहनुपर्छ किनभने जहाँ यी कुरा हुन्छन्, त्यहाँ मा लक्ष्मीकाे कहिल्यै बास […]
देउवा सरकारको ६ महिना न अतिक्रमित भू–भाग फिर्ता भयो, न एमसीसीमा सहमति जुट्यो
January 14, 2022 N88LeaveaComment on देउवा सरकारको ६ महिना न अतिक्रमित भू–भाग फिर्ता भयो, न एमसीसीमा सहमति जुट्यो
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ६ महिना पुरा भएको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाले यसबीचमा नियमित सत्ता सञ्चालन गर्नेभन्दा माथि गर्भ गर्नलायक एउटै काम गर्न हुन सकेन । गठबन्धनको बुइ चढेर ओली सरकारलाई विस्तापित गर्दै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा जनताका अपेक्षा स्वभाविक […]
राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा बागमती प्रदेशमा एमालेलाई धक्का, यस्तो छ मतभार
January 14, 2022 N88LeaveaComment on राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा बागमती प्रदेशमा एमालेलाई धक्का, यस्तो छ मतभार
काठमाडाैं । आगामी माघ १२ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन अन्र्तगत बागमती प्रदेशमा २ सिटका लागि सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका ६ जना उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । मतभारको आधारमा बागमती प्रदेशमा पनि गठबन्धनकै जित सुनिश्चित देखिन्छ ।निर्वाचनमा सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी […]
January 14, 2022 N88LeaveaComment on परमादेश सरकारको उपहार – नफामा रहेको मुलुकको एक खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ घाटामा
काठमाडौं । मुलुकको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा भुक्तानी अवस्था एक खर्ब ९५ अर्ब एक करोड घाटामा पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा एक खर्ब छ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको मुलुकको शोधनान्तर स्थिति चालु आवमा यति धेरै घाटामा रहेको हो । सर्वाेच्च अदालतको परमादेशबाट गठन भएको पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले जथाभावी […]
काठमाडौं । जनता समाजवदी पार्टी ( जसपा) को संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई विकल्पको खोजीमा लागेका छन् । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सम्बन्ध बिग्रिदै गएपछि भट्टराई नयाँ विकल्पमा लागेका हुन् । नयाँ पार्टी बनाउने वा महन्थ ठाकुरसँग मिलेर जाने भन्नेमा भट्टराई आन्तरिक छलफलमा रहेको भट्टराईनिकट स्रोतको दावी छ । बाबुराम अहिले गोरखामा निर्वाचन कसरी जितिन्छ […]